Qodobada Sarah Saker ee ku saabsan Martech Zone |
Maqaallada by Sarah Saker
Sarah Saker waa tababare ganacsi iyo qoraa madaxbanaan oo ku takhasusay ka caawinta hababka dejinta SMBs ee taageerada macaamiisha iyo kobaca la saadaalin karo. Markii aan la qorin ama la tababarin, Sarah waxaa laga heli karaa iyada (yar, laakiin sii kordheysa!) Beerta qoyskeeda. Ku xidhnow Sarah ku saabsan.me/saker xagga caawinta tababarka ama qorista.
Talaado, Disembar 18, 2018 Isniin, Janaayo 27, 2020 Sarah Saker
Waxaa jira tafaariiqleyaal badan oo e-commerce ah oo halkaas yaal - adiguna waxaad ka mid tahay iyaga. Waxaad ku jirtaa muddada dheer. Sidan oo kale, waxaad u baahan tahay inaad awood u yeelatid inaad la tartantid sida ugu wanaagsan boqolaalka kun ee dukaamada khadka tooska ah ee internetka ku jira maanta. Laakiin sidee taas u samaynaysaa? Waxaad u baahan tahay inaad hubiso in websaydhkaagu uu yahay mid rafcaan leh intii suurtagal ah. Haddii si xun loo qaabeeyey, magac weyn ma lahan,